Amazon biotope yeentlobo ezincinci | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | Izixhobo, I-Aquarium yetropiki
Zonke iintlanzi ezincinci kuneesentimitha ezilishumi ziintlobo ezincinci. Imalunga ne iintlanzi ezinoxolo kakhulu kwaye ifikeleleke ngokugqibeleleyo ukuphinda wenze i encinci ye-Amazon biotope.
Kule ntlobo bayacetyiswa I-aquariums ebanzi kunobunzulu, Iilitha ezingama-60. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba ngexesha lokuzala baya kuthatha njengenxalenye ye-aquarium eya kuthi bayikhusele ngendlela enoburharha, ukuba kukho imfuneko.
1 Amancinci eAmazon Biotope Aquarium
2 Ibonisiwe iintlobo
Amancinci eAmazon Biotope Aquarium
Khumbula ukuba i-biotope kukuphinda kwenziwe indawo ngokweemeko ezithile zokusingqongileyo iintlanzi kunye nophuhliso lwezityalo, Kule meko amaAmazon kunye neentlobo ezincinci.
Ezi ntlanzi zisasazwa kwisitya se Umlambo iAmazon kunye neenzuzo. Zinezityalo ezininzi. Imiphanda ukuze iintlanzi zikwazi ukuzimela kunye namanzi azolileyo. Amanzi athambile kwaye ane asidi, ngamaqondo obushushu aphakathi angama-26ºC.
Ke ngoko, ukuyiphinda uyenze, kuya kufuneka wenze ifayile Indawo yaseAmazon ngokungathi yindawo yayo yendalo. Ukuba zii-aquariums ezincinci akukhuthazwa ukuba ubeke ngaphezulu kweentlanzi ezintathu okanye iintlanzi ezine. Ukuhonjiswa kuya kubandakanya iilogo, ezinye izityalo ezineemfuno eziphantsi zokukhanya kunye namatye.
Icebo lokucoca ulwelo elinamandla elisebenzayo liyacetyiswa kwaye okoko nje ungenzi ntshukumo ininzi kwi-aquarium, ziintlanzi zamanzi ezizolileyo. Ingabandakanywa I-ficus ishiya i-aquarium njengomhombiso.
Kwi-aquarium encinci yeAmazon awungekhe uphuthelwe Iintlanzi zeetras, kuba zihlasela kakhulu. Inkqubo ye- discus intlanzi ziyahambelana ngokupheleleyo ukuba i-aquarium inokulungiselela indawo encinci yeempawu ezintathu. I-Angelfish ikwakhona ukhetho kuba bahlala kwiindawo eziphakamileyo kwikholamu yamanzi kwaye ngekhe baphikisane nemimandla yeentlanzi eseleyo.
Ngokubhekisele kwizityalo zolu hlobo lwe-biotope yeAmazon, zizezodidi lwe-Echinodorus.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Amazon biotope yeentlobo ezincinci